FAMPIVOARANA NY TANTSAHA: Atsangano ny banky fampandrosoana
Lynda ANDRIATSITONTA FIER MADA, makis andohatapenaka	0 Commentaire août 3, 2018
Hetahetan’ny tantsaha ny hananganana banky fampandrosoana isaky ny distrika. Voafetra ireo tetikasa tohanan’ireo mpamatsy vola vahiny hampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Mangataka ireo tantsaha mba asiana tetikasa momba famokarana eran’ny faritra 22 ary atao mifanaraka amin’ny tontolo iainana isam-paritra izany. Anisany fehin-kevitra nivoaka tamin’ny loabary an-dasy tamin’ny Fier Mada andiany faha-19 io fangatahana io. Io banky fampandrosoana io no ahafahana manao izany. Nambaran’ny filoha mpanorina ny Fier Mada, Jacques Rabemanantsoa fa ny vola azo avy amin’ny fitrandrahana ara-dalana sy ara-drariny ny harena an-kibon’ny tany sy ny harena anaty ranomasina ary ny fizahan-tany no hampandehanana ny banky.
Taratry ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny Fier Mada. Nitombo ny mpandray anjara tamin’ny andiany faha-20. Efan-jato ny isan’izy ireo. Araka ny fanambaran’ny mpikarakara aza dia mbola nisy mpandray anjara 50 nolavina fotsiny satria tsy homby intsony ny toerana. Hifarana ny alahady 5 aogositra 2018 ity hetsika natokana ho an’ny fambolena sy ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy ity. Hita eny amin’ny kianjan’i Makis Andohatapenaka ihany koa ireo fitaovam-pamokarana ilain’ny tantsaha.
‹ ANDRO MAITSO: Tsy mampiasa moto sy fiara	› MARATHON INTERNATIONAL DE TANA : La protection de l’environnement rime avec le sport